“Dowladu ha u doorto dadka cusub magaaladii ay dagi lahaayeen” | Somaliska
Dooda ku saabsan arimaha isdhexgalka iyo soo galootiga ayaa cirka isku shareertay ka dib markii xalay ay gudoomiyaha degmada Södertälje Boel Godner (S) dalbatay in laga joojiyo dadka soo galootiga ah ee magaaladeeda u soo guuraya.
Haweeneyda maayarka ka ah magaalada Södertälje oo ka tirsan xisbiga SocialDemokraterna (S) ayaa ku cataabtay in aysan guryo, shaqo iyo dhaqaale midna u hayn soo galootiga soo degaya magaalada ay maamusho. Waxay sheegtay in Ciraaqiyiin iyo Siiriyaan fara badan ay magaalada Södertälje doortaan maadaama ay qaraabadooda ku noolyihiin halkaasi. Waxay dowlada ka dalbatay in dadka doonaya in ay degaan Södertälje loo diido fursadaas oo magaalooyin kale loo diro.
Arintaas ayaa waxaa dood ka yeeshay iyada iyo wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag oo ku dooday in aysan dowladu yeeli karin in ay dadka xuquuqda ka qaado ay ku dooranayaan halka ay wadanka kaga noolaan lahaayeen. Wasiirka ayaa muujiyay maalgalinta iyo lacagaha ay dowladu u balan qaaday kamuunada soo dhaweeya dadka cusub.
Ka dib doodaas, ayaa waxaa sidoo kale dood kale dhexmartay gudoomiyaha xisbiga cunsuriyiinta Sverige Demokraterna (SD) iyo wasiirka isdhexgalka iyagoo ka dooday arimo badan oo ay ku jiraan saamaynta Muslimiinta, sida loo caawin karo soo galootiga iyo arimaha isdhexgalka. Jimmie Åkesson ayaa ku dooday in Muslimiintu ay badalayaan dhaqanka Sweden iyo in dowladu ay albaabada u furtay fatahaada soo galootiga oo aysan wax qorshe ah u hayn. Wasiirka ayaa dhinaciisa sheegay in Sweden ay tahay wadan furan oo qofkii caawimaad u baahan la caawinayo.
Dooda ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb qaatay dhowr qof oo soo galooti, Muslimiin iyo Soomaali ah. Dadka dooda ka qeyb qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa wiil Soomaali ah oo fikradiisa ka dhiibtay arinta in dadka dowladu meel dajiso iyo in ay iyagu doortaan halkii ay dagi lahaayeen.
Hadaba sidee u aragtaan arintaan. Ma haboontahay in dowladu ay dadka u doorto magaalada ay dagayaan? Maxaa laga yeeli karaa qulqulka soo galootiga halka magaalo isku urursada?
asc dadka jeclaaday ama isku urursado magaalo waa qalad dalka sweden waa dal wayn hadii stockhlom iyo nawaaxigeeda laysku wada urursado yaa dagaaya waqooyiga barafka badan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk soo galoo tiga waa dad waalan waxa ila fiican ineey dowladu u doorto meeshu dagayo kana heli karo shaqo iyo guriba qofka wabilaahi towfiq
asc wr wb ani ahaan waxaa wabaa in aan dadka laga qaadin xoriyada waayo qofku waa qof kula mid ah sid aaad u diidan tahay in aad waqooyiga degdegto ayuu asna u diidaya waxaa ila haboon meesha u rabo in uu dego mideeda kale meelaha barafka leh dowdaldu wax yaabo ay kaga dheer tahay goobaha kale ay jirto oo qofkii deegaan ahaan dega uu helayo waa ay fiicnaan laheyd
asc dhamaan bahdsa somaliska waxaan fiican in qofka xoriyadiisa la siiyo halka uu dagayo laakiin ma fiicna in magaalo ay soo galootigu ka buuxaan oo kale aad degtid waayo fursado badan ayaad waayaysaa laakiin xoriyadu waa muhiim doorashada qofka meesha uu rabo waa in la tixgaliyaaa wabillaaahi tawfiiq.
axamad isaaq says:
Asc, waxa aan ku darsan lahaa walalayaal in nasra ladajiyo waqooyiqa sweden si ay ugu is dareexdo way ka heshaa yee wsc
ASc waan idin salamay dhaan anigu waxaan dhihi lahaa dadka yaan yaan la qasbin dadkana ninwaba hadka dadtu ugu jirto waa garanayaaye ha aado
September 22, 2012 at 03:48
sxb Jimcaale doodaas adaa ku haboona, yarka somaliga ah wuu fiicnaa markii uu fikirkiisa dhiibanayay,,,,,, lakiin Eftersanck kii ayuu jag är, jag har, jag ….. ka bixi waayay markii la waydiiyey siduu u arko debbat ka,taasna waxa ay keentay in wariyuhu ka sii jeesto,, waxa uu ilaaway meesha in grupp av folk laga hadlayo,,,,, marka bal adigaa khabiir ahe Eftersnack daawo ,,, oo hadii fikirkeyga mid ka duwan aad qabtid soo qor,,,, hadii keyga oo kale aad qabtidna , yarka isku kommun ayaa dagantihiine fahansii wixii khaldan
asc mr jimcale waan ku salamay aniga waxaan donayaa in aan meesha aan doono dagi karo oo xuriyada aan aniga is ka leeyahay
ASC salaan kabacdi waxaan u jawaabaa naagta aqliga gaaban sababtoo ah waxba kamataqaan is dhex galka bulshada marka shaqadaada ku ekoow ayaan leeyahay ee jooji cunsuriyada bulshadane hakicin
Sc. Waa laba arin kala fog in wax laguu dooro iyo inaad wax doorato waayo markaad wax dooraneyso waxaad kusaleyneysaa dantaada halka ay kujirto.
Tusaale: hadaan caruur soo koreysa leeyahay magaalo mageeyeen waayo magaalooyinka waa weyn daroogo ayaa lagau baraa ciyaalka waa fasahaad.
Balse keli markaan ahay no 1 waa magaalo weyn, laakiin waxaan rabi lahaa Walaashee Nasra in iyada laga bilaabo oo lageeyo Kiruna.
Runtii farqi weyn ayaa udhaxeeya xaga cimilada cid rabta iney qaboowga saa’idka ah majirto sida aan filaayo.